Taageerayaal Chechen ah oo arrin uu ku farxay u sameeyay Mohamed Salah! | Hadalsame Media
TOOS u daawo: Somalia vs Cumaan – LIVE (Shaxda Sugan)
Xogo dheeraad ah oo kasoo baxaya sida lagu soo helay Xafsa…
Somalia iyo Itoobiya oo kala saxiixday heshiis kalluun fara badan looga…
SOMALIA VS CUMAAN: Somalia oo caawa fiidkii wajahaysa ciyaar bug-bax ah…
Sida loo maareeyey arrinta dhaawaca Kornayl Saneey oo muujinaysa 2 arrimood…
Haweenayda sawirkan ka muuqata aad bay uga culus tahay waxa la…
”Somalia waa naga yaabin kartaa!” – Wargaysyada Cumaan oo ay qaar…
Wadnaha Eriksen oo lagu xirayo mashiin yar oo garaac wale ah…
Home Ciyaaraha Taageerayaal Chechen ah oo arrin uu ku farxay u sameeyay Mohamed Salah!
Taageerayaal Chechen ah oo arrin uu ku farxay u sameeyay Mohamed Salah!
(Grozny) 16 Juun 2018 – Arbaha xulka Masar ee Mohamed Salah ayaa maalin murugo ah ugu dabaal degey gugiisii 26-aad kaddib markii ay 1-0 kaga badisay Uruguay, yeelkeede, taageerayaal reer Chechnya ah ayaa kaga farxiyay doolshe 100kg oo lagu qurxiyay kabo dahabi ah.
Salah, oo dhaliyay 44 gool fasal-ciyaareedkan ayaa dhaawac garabka ku seegay farxaddi Champions League oo ay Real Madrid ka qaadatay, iyadoo sidaa darteed aan halis lagu gelinin kulankii furitaanka Guruubka A.
Waxaase lagu wadaa in la safo kulamada harsan ee ay ku wajahayaan Russia iyo Saudi Arabia, waxaase dhacday in taageerayaal is xilqaamay ay ku shardeen doolshe wayn oo laba dabaq ah oo lagu xardhay midabbada calanka Masar, waxaana lagu guddoonsiiyay xerada tababarka ay ku leeyihiin Grozny.
Salah ayaa isagoo dhoolacadaynaya hab siiyay saaxiibadii oo ku heesayay ”dhalasho wacan” oo Carabi iyo Ingiriisi ah, isagoo deetana afuufay shumacyadii.
Masar ayaa Talaadada Ruushka kula ballansan St Petersburg.
Previous articleGOOGOOSKA: Croatia vs Nigeria 2-0 (Nigeria oo laba la laqsiiyay)
Next articleMaxay warbaahinta dalalka derisku ka qoreen booqashadii Raysal Wasaaraha Itoobiya?
Xogo dheeraad ah oo kasoo baxaya sida lagu soo helay Xafsa Luqmaan (Xaalad cabsi leh & Sawirro)
Somalia iyo Itoobiya oo kala saxiixday heshiis kalluun fara badan looga iibinayo Itoobiya + Sawirro
hadalsame - June 20, 2021
(Nairobi) 20 Juun 2021 - Xafsa Maxamed Luqmaan oo ah gabar Soomaaliyeed oo dhowaan laga qafaashay Xaafada California Estate ee magaalada Nairobi, iyadoo laga...
”Iin ma laha Italia!” – Daily Mail oo amaan kala dul dhacay Xulka Talyaaniga oo ay ku sheegeen midka sanadkan ugu xooggan
SOMALIA VS CUMAAN: Somalia oo caawa fiidkii wajahaysa ciyaar bug-bax ah oo muhim ah
Sida loo maareeyey arrinta dhaawaca Kornayl Saneey oo muujinaysa 2 arrimood oo walaac leh
(Dooxa) 20 Juun 2021 – Waxaa caawa magaalada Dooxa ee dalka Qadar ku qabsoomaysa ciyaar isreebreeb ah oo loogu soo baxayo Koobka Carabta FIFA...
TOOS u daawo: Netherlands vs Austria – LIVE (Shaxda Sugan)